OLAC Record: Description d'une journée d'écolier_BUR_1964_023A
Title: Description d'une journée d'écolier_BUR_1964_023A
အသံသွင်းချက်မှကောက်နုတ်ချက် ၃၇ မိနစ် မှ ၄၄ မိနစ်ထိ။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရလက်ထက်၊ မယ်ဇီကျောင်း(လှည်းတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့)၏တနေ့တာအကြောင်းများဖော်ပြချက်။
Contributor (consultant): Aurore Candier
Contributor (sponsor): Dynamique Du Langage
Contributor (transcriber): Aurore Candier
Date Available (W3CDTF): 2019-02-27
အသံသွင်းချက်မှကောက်နုတ်ချက် ၃၇ မိနစ် မှ ၄၄ မိနစ်ထိ။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရလက်ထက်၊ မယ်ဇီကျောင်း(လှည်းတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့)၏တနေ့တာအကြောင်းများဖော်ပြချက်။ အမျိုးသားတဦး (မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖတ်စာအုပ်ပါစာများကို ဝါကျတကြောင်းကို ၂ ကြိမ်စီ) ဖတ် ကြားခြင်း။ သူသည် ကျောင်းချိန်များ၊ နိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုခြင်း၊ ဘုရားရှိခိုးခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော် သစ္စာ ဓိဌာန်ငါးချက်တို့အား ကျောင်းသားငယ်တို့ နံနက်ခင်းစုရုံးချိန်တွင်ပြုလုပ်ပုံ၊ ထမင်းစားခန်း၊ အမျိုးမျိုးသောအားကစားဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအကြောင်းပြောဆိုသည်။ “မယ်ဇီကျောင်းမှာ ကျောင်းတက်တော့မယ်ဆိုရင် ခောင်းလောင်းတီးတယ်။ ကိုးနာရီခဲွမှာတက်တယ်။ ကျောင်းသူကျောင်သားတွေအကုန်လုံး ဘုရားရှိခိုးဖို့ တနေရာတည်းမှာ စုရုံးကြရတယ်။ ပထမဦးဆုံး ဘုရားကို ဦးသုံးကြိမ်ချပြီး သြကာသရွတ်ဆိုဝတ်ပြုကြတယ်။ ငါးပါးသီလယူရတယ်။ ပန်းကပ်၊ ရေချမ်းကပ်၊ နောက်ပြီးတော့ အမှျဝေကြတယ်။ အဲဒါပြီးရင် လူငယ့်အဓိဌာန် ငါးချက်ကိုဆိုကြရတယ်။ အဲဒီငါးချက်ကတော့၊ (၁)ကွျန်ပ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တိုင်းရင်သားလုပ်သားပြည်သူများအပေါ သစ္စာရှိပါမည်။ (၂)ကွျန်ပ်တို့သည် လုပ်အားတန်ဖိုးချစ်မြတ်နိုးသောစိတ်ကိုမွေးမြူ၍ လုပ်သားကောင်းဖြစ်မြေှာက်အောင် ကျုိးစားပါမည်။ (၃)ကွျန်ပ်တို့သည် လူလူချင်းညှာတာထောက်ထားသော အသိစိတ်ဓါတ်ဖြင့်ဆက်ဆံပါမည်။ (၄)ကွျန်ပ်တို့သည် ဆိုရှက်လစ်လူ့ဘောင်တည်ဆောက်သူများ၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများဖြစ်အောင် ကျုိးစားအားထုတ်ပါမည်။ (၅)ကွျန်ပ်တို့သည် ပေးအပ်သောတာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ကြပါမည်။ အဲဒီသစ္စာအဓိဌာန်ငါးချက်ကုိရွတ်ဆိုပြီးရင် ဆရာများက ဆုံးမစကားပြောကြတယ်။ ပြီးနောက် ကိုယ်အတန်းကိုယ်အသီးသီးသွားကြရတယ်။ ကျောင်းတက်ြပီ။ သင်ခန်းစာသင်တော့မယ်။ မနက်ပိုင်းသင်ပြီးရင် နေ့လယ်ပိုင်းဆယ်နှစ်နာရီကျရင်၊ နေ့လယ်မုန့်စားလွှတ်ချိန်ရောက်လိမ့်မယ်။ တစ်နာရီအထိကျောင်းလွှတ်မယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ တချု့ိလဲ အိမ်နီးရင် အိမ်ပြန်ပြီးထမင်းစားကြတယ်။ တချု့ိလဲ အိမ်ကလာပို့တယ်။ တချု့ိလဲ ကျောင်းမှာဘဲ မုန့်ပဲသရေစာ စားကြတယ်။ ကျောင်းဝင်းထဲမှာ နေရာကျယ်ကျယ်မရှိဘူး။ ကစားကွင်းမရှိဘူး။ တချု့ိကျောင်းတွေမှာတော့ ကစားကွင်းရှိတယ်။ ဒီကျောင်းမှာတော့ ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာဘဲ ဖြစ်သလိုကစားကြရတယ်၊ ဆော့ကြရတယ်။ ကစားနည်းတွေကတော့ စုံနေတာဘဲ။ မိန်ကလေးတွေက ဖန်ခုန်တယ်၊ ဇယ်တောက်တယ်၊ ဂုံညှင်းထိုးတယ်၊ ကြိုးခုန်တယ်။ ယောက်ျားလေးတွေက ကျည်းသားရိုက်တယ်၊ ဂျင်ပေါက်တယ်၊ ဂါမှန်ကဲတယ်၊ ဒုံပစ်တယ်။ ယောက်ျားလေးရော မိန်ကလေးရော အသင်းခွဲပြီးထုပ်ဆီးတိုးတယ်။ တစ်ချက်ထိုးရင်ကျောင်းပြန်တက်ရော။ ညနေသုံးနာရီခွဲတော့ ကျောင်းဆင်းတယ်။ ကျောင်းဆင်းချိန်မှာ နိုင်ငံတော်သီချင်းဆိုပြီး နိုင်ငံတော်အလံအလေးပြုကြရတယ်။ တချု့ိမူလတန်းကျောင်းတွေမှာတော့ ကျောင်းသားသိတ်များလို့ နှစ်ချိန်ခွဲထားရတယ်။ မနက်ပိုင်းတချိန်၊ ညနေပိုင်းတချိန် ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို ခွဲပြီးသင်ပေးတယ်။"
Identifier (URI): https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-45803052-f70c-41a5-9674-219ca0265ef8
Is Format Of (URI): https://cocoon.huma-num.fr/data/bernot/masters/bernot1-1391111317.wav
Is Required By (URI): oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-d1b45aee-15b9-47fc-b45a-ee15b977fc83
Citation: Bernot, Denise (researcher); Vittrant, Alice (depositor); Vittrant, Alice (researcher); Aurore Candier (transcriber); Aurore Candier (consultant); Dynamique Du Langage (sponsor); Labex ASLAN (CNRS, ENS, Université Lumière Lyon 2) (sponsor); Khin Khin Zaw (consultant); Thandar Oo (consultant). 1964. Dynamique du langage.
Terms: area_Asia country_MM dcmi_Sound iso639_mya olac_primary_text